माथिल्लो तामाकोशी लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पछिल्लो प्रगति यस्तो देखियो ! - Jhilko
माथिल्लो तामाकोशी लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पछिल्लो प्रगति यस्तो देखियो !
१ मंसिर,२०७६ 118 0
काठमाडौं : उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ । मन्त्रालय मातहत विभिन्न ७ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत छन् । तीमध्ये पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको छ । मन्त्रालय मातहतमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजना र सिक्टा सिँचाइ आयोजना छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा सूचीकृत माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा समेत थप १ प्रतिशतको योगदान पु¥याउने भएकाले त्यसको महत्व झनै बढी रहेको छ । हाल आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति ९८.५ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा यस आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति ७६.५५ र वित्तीय प्रगति ७१.२५ प्रतिशत रहेको छ ।
मन्त्रालयले यस आयोजनाका लागि चालु आवको प्रथम चौमासिकमा २ अर्ब ४६ करोड ३८ लाख बजेट उपलब्ध गराएको थियो । हाल आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडानको कार्य भइरहेको छ । अष्ट्रियाको निर्माण कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोले तोकिए अनुसार काम गरे पनि भारतीय निर्माण कम्पनी टेक्सम्याकोको कार्य प्रगति भने कमजोर रहेको छ ।
आयोजनाको पहिलो युनिट आगामी चैतभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ भने पूर्ण रुपमा आयोजना चालु आवको अन्त्यसम्म सञ्चालनमा आउनेछ । यस्तै, मन्त्रालयका अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचा तय नभए पनि आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण भइरहेको छ ।
मुआब्जा तय गर्न बाँकी रहेका गोरखाको आरुघाट, आर्खेत बजार तथा धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा तय भएको छ । मङिसर १६ गते मुआब्जा तय भए पनि आयोजना प्रभावितले सरकारले तय गरेको मूल्य आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् ।
आयोजनाका चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ५६ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजित थियो । आयोजनाका लागि हालसम्म २८ अर्ब ३४ करोड बराबरको रकम खर्च भइसकेको छ । डुबान क्षेत्रमा पर्ने ५८ हजार १५३ रोपनीमध्ये ४४ हजार ६५९ रोपनीको मुआब्जा बापत २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख वितरण भइसकेको छ । बाँकी रहेको जग्गाको समेत चालु आवभित्रै मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी रहेको छ ।
चालु आवको प्रथम चौमासिकमा कुल भौतिक प्रगति ६२.०९ र वित्तीय प्रगति ६२.०९ प्रतिशत रहेको छ । मुआब्जा निर्धारणको समस्या फुके पनि आयोजनाको पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना नीति पारित नहुनु, लाभकर ताथ ह्रासकट्टी नगर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय हुन नसक्दा जटिलता पैदा भएको छ । मुआब्जा लिएका नागरिकले लाभकर तिर्नु परेकामा गुनासो गर्दैै आएका छन् ।
यस्तै, मन्त्रालय मातहतको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको पनि काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । चालु आवको प्रथम चौमासिकमा ६३ करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन भएकामा भौतिक प्रगति ३८.६ र वित्तीय प्रगति ११९.७६ प्रतिशत रहेको छ । आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भई त्यसको मर्मत जारी छ ।
यस्तै, विद्युतगृह र बाँधस्थल निर्माणको काम सुरु भएको छ । विद्युतगृह र बाँधस्थल निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालित भएको र बाँधस्थलको जग्गा प्राप्तिका लागि मूल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरणको काम सुरु भएको छ । आयोजनाका लागि वनको जग्गा प्राप्ति, रूख कटाइमा ढिलाइ, स्थानीय निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा समस्या देखिएको छ ।
आयोजनाको कुल लागत सुरुमा १६ अर्ब ४३ करोड ३० लाख रहेको थियो । बाँधस्थल र विद्युत् गृहसहित आयोजनाको संशोधित कुल लागत ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख रहेको छ । त्यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजनाको चालु आवको प्रथम चौमासिकमा कुल भौतिक प्रगति ८०.२८ र वित्तीय प्रगति २४.८६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस अवधिका लागि कुल बजेट ३१ करोड ४ लाख रहेको छ । आयोजनाको मूल नहर निर्माण सम्पन्न भई २९ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन पुगेको छ ।
यस्तै, २२ किमी शाखा, उपशाखा नहरका लागि १५ प्याकेजमा निर्माण सुरु भएको छ । यस आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, सञ्चालनसँगै विस्तार तथा सुधारका कार्य गर्नुपर्दा काममा ढिलाइ भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र आयोजना परेकाले मानव मेशिनरी सामग्री ढुवानी तथा आवागमनमा समेत समस्या परेको छ ।
त्यस्तै, रानी जमरा, कलरिया सिँचाइ आयोजना र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भने प्रगति आशातीत रुपमा राम्रो रहेको छ । चालु आवको प्रथम चौमासिकमा रानी जमराको भौतिक प्रगति ८१.२९ र वित्तीय प्रगति ८३.२७ प्रतिशत रहेको छ । आयोजनामा जग्गा प्राप्तिमा समस्या रहेको छ ।
सिक्टाको हकमा भौतिक प्रगति ८०.१६ र वित्तीय प्रगति ६१.८७ प्रतिशत रहेको छ । आयोजनामा नहर रेखांकन तथा जग्गा अधिग्रहणमा अवरोध, वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ, निर्माण सामग्री गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको आपूर्तिमा कठिनाइ रहेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अरूको भन्दा बढी हुनुपर्ने, आयोजना प्रमुख आयोजनास्थलमा रहनुपर्ने र कार्यसम्पादन करार सम्झौता अनुसार काम गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । प्रथम चौमासिकमा प्रगति सन्तोषजनक भएपनि अन्य चौमासिकमा उल्लेख्य प्रगति देखिनुपर्ने उनको जोड छ । रासस
सचिवालय बैठक अघि प्रचण्डको गृहकार्य...
६ पुष,२०७६073
यस पटकको लाइसेन्स परीक्षामा कति चिकित्सक पास भए ?
१ श्रावण,२०७६0204
एमबिबीएस तहका परीक्षामा एक हजार ६८१ ले नाम दर्ताका लागि फारम भरेका थिए । तीमध्ये...
५ पुष,२०७६085
५ चैत्र,२०७५0225